DAAWO VEDIO: Xildhibaanada P/land oo si adag uga dooday Arrin Xasaasi ah & Go’aam ay ka gaareen – Marqaan News
Home 2018 July Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland DAAWO VEDIO: Xildhibaanada P/land oo si adag uga dooday Arrin Xasaasi ah & Go’aam ay ka gaareen
DAAWO VEDIO: Xildhibaanada P/land oo si adag uga dooday Arrin Xasaasi ah & Go’aam ay ka gaareen
July 11, 2018 | by	marqaan | 4
Golaha Wakiilada Puntland,ayaa si adag uga dooday sida wax loogu qaban karo Tahriibka oo dhalinyaro badan Soomaaliyeed ku waalan yihiin.
Tahriibka ayaa ah dhibatada ugu badan ee haatan dhalinta Soomaliyeed heysato,waxaana Xildhibaanada Puntland ay shaacoiyeen ineysan u dulqaadan doonin iney arintaan sii socdaan.
4 thoughts on “DAAWO VEDIO: Xildhibaanada P/land oo si adag uga dooday Arrin Xasaasi ah & Go’aam ay ka gaareen”
Prince of Maakhir July 11, 2018 at 3:24 pm · Edit
Madaxda Puntland nacnac iyo huuhaa ayay caadeysteen oo hadda waa ba lagu qoslaa mar kasta oo ay afka kala qaadaan. Shaxda siyaasadeed waxay qeexaysaa in hadalka la dimmo oo hawsha la badiyo, haddii kale haybadda dawladnimo ayaa zuulaysa. Calwasaadka iyo cantatabka laga dareemayo Villa Garoowe Puntland ayay mansabkeedii caaddaa marayay ciidda kaga camcaminayaan runtii.
Cakirsanaantan Hartiga curyaamisay waxaa u lahaa qaddiyaddii muqaddaska u ahayd oo cashatabtay iyo shimbirkii casabanimo oo khilaafto caato ah lagu casamaray. Tolkani waxaa ciil bixin kara oo keli ah carafudaydkan oo ay ka caqliyeystaan iyo cuqaasha iyo culimada oo ay dib u cimaamadeystaan inta ay siyaasi tuug ah caynsan lahaayeen. Tolnimadu caraabi mayso ee qorshe cawilcelis ah ha loo cusho gaawaha.
Gabar Harti July 11, 2018 at 4:43 pm · Edit
ku: Inta beent/faanka caadeeysatay!
War nimanyahow! kkkkkk mindhaa waxa aan la doodeeyno waa waxa dhalada uun agtaalo oo wax eey kanaxayaanba jirin!
Horta Daarood xagee baad ku aragteen oo aad ooga adkaateen? waa yaabe! koonfur baan joogay markii QOWLEEYSATADU mooryaan iyo darbi jiifba isa soo aruursatay.
Dir oo dhan
iyo Daarood oo 30% hadana DHARBAAXADII LAOGAA kugu dhacday ilaa iyo hada aad lajiifto.
Mideeda kale WALLAHI baan ku dhaartaye inaanan kufaanin dhibaato qof Islamnimo sheeganaya aan ugeeysanay lkn reerka Isaaq iyo Mooryaan waxaad moodaa in lasoo CIILAY! Calashaan cuqdad baa idin dishay.
Waxaad ku faantaan
GABAR DAAROOD BAAN WAA KUFSANAY
NIN DAAROOD BAAN WAA DILNAY
TUULO DAAROOD BAAN WAA QABSANY
OO MUCJISO! INTII IDINKA LAIDINKU SAMEEYEY WAA DULMI LAIDIIN GEESTAY INAAD GEESATEENA MUJAAHIDNIMO!
Prince of Maakhir July 11, 2018 at 10:52 pm · Edit
Salaantii barakeysnayd ee saldanadaheena iyo boqortooyinkeena ayaan hawada kuu soo marinayaa. Ina Boqoreey duulkani yaanay na xiiqsiinin waayo waa dhagax ay taabasho iyo tuujini isugu mid yihiin. Dadku waxay u kala qaybsamaan ilbaxda iyo ilcirta oo Soomaalidu na waa sidaas. Cawaan uun baa caado ka dhigata oo kuna faanta maato ay waxyeelleeyeen. Waxaa u astaamo ah waxshinimo, jaahilnimo, doqonnimo, af xumo iyo kas xumo. Daaroodka waa ba kedis lagu dhibaateeyay waayo dhiilo colaadeed ku ma jirin ee shacab noloshooda iska wata ee Soomaalida walaalahood ahaa isku halleeyay ayay ahaayeen. Maxaa se ka dambeeyay?
In sida aad sheegtay ay guulaha iyo libintu Daaroodka ku dambeeyeen. Maanta geyiyada Soomaaliyeed kuwa Daarood baa ugu badan, ugu tun weyn oo ugu na tayo sarreeya. Geyiyadooda ayaa oogu barwaaqeysan oo ugu na hormarsan. Kuwii ka xaq darnaa na waa loo jeedaa aaya beelka ku dhacay iyo dulliga ay ku nool yihiin. Burqadkoodu waa uun baroor ay isku ciil tirayaan ee wax kale ha moodin. Bal maanta oo 2018 la joogo bal carr Daaroodka ha ku dhiiradeen ina boqoreey haddii ay raganimadaas isla hayaan. Dawacadu in ay libaaxa ka daba yawyawlayso waa lagu yaqaanaa laakiin agtiisa ku ma dhacdo in ay qori yar ka jabsato. Sawaaxiligu waxay ku maahmaaheen daasad madhani sanqadha ma dayso.
Aliwood July 12, 2018 at 6:31 am · Edit
Dhibaatada ku habsatay Puntland waa mid Mudanayaasha Baarlamaankooda 66da ah uga timi kuwaasoo mas uul ka ah. Ragani waa kuwa doortay Gaas oo aan aqoon u lahayn maamul iyo horumarin daleed. Dadkiinii waxaa ka doorateen dhaqaale uu idin siiyay Gaas.
Shaqsi walba oo idinka mid ah waa ogyahay dagaalada beeleed oo si arxan daro ah ay isu laynayaan qabaailada goooobolkaas dega. Marqaati baad ka tihiin in in la isku ugaarsado baadiyahay oo nin uu ku dhicin inuusocdaalo. Jahliiyo caafimaad xumo dadkiidegaanka ku kaliftay inay Muqdushow aadaan ama dhallinyarada tahriib ay ku dhamaadaan. Yaa laga doonayaa horumarinta dadka iyo dalka yaa laga sugayaa in uu sameeyo shaqo abuur
Walaalahay baarlamaanka ku jira ilaah ka baqa oo dadka ka hor leexda.
Reer koofureed wa idiin jeedan in aad caqabad ku noqoteen dadkiina > Yaa u ogolaaday dagaalka uu dadka isku dhameynayo Gaas ma la’yahay siyaasad furfuranuu ku kasbado walaalihiis reer Sool iyo Sanaag. Maya reer dhuusamareeb ka soo dir fariintraan